निजी प्रयोजनमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन देशका लागि घाटा ! - UrjaKhabar निजी प्रयोजनमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन देशका लागि घाटा ! - UrjaKhabar
निजी प्रयोजनमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन देशका लागि घाटा !
डा. विश्वास गाैचन
काठमाडाैं । निजी प्रयोजनका लागि विद्युतीय सवारी आयातमा दिइएको कर सहुलियतले मुलुकलाई तीन प्रकारले प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सान थियो । पहिलो, इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको दाँजोमा उल्लेख्य रूपमा अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्चिनुपर्ने अवस्था थियो । दोस्रो, आयातमा कर छुटको कारणले राजश्व संकलनमा उल्लेख्य असर परेको थियो । तेस्रो, इन्धन खपतबापत संकलन हुने राजश्वबाट पनि सरकार बन्चित थियो ।
हाम्रो सन्दर्भमा इन्धन खपत र सवारी साधन आयात राजश्वको दुई प्रमुखहरू स्रोत हुन् । यसको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगबाट हुने प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भने नगन्य छ । वातावरणिय संरक्षणमा योगदान, व्यक्तिगत सञ्चालन खर्चको बचत र बिजुलीको बढ्दो खपत हुने आधारमै विशेष सुविधा दिएर तत्कालै विद्युतीय सवारीको प्रयोग नेपाल जस्तो निम्न आय भएको राष्ट्रलाई कतिको सान्दर्भिक छ ?
याे कुरा गम्भीर रूपले लाभ र लागतका आधारमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । सन् २०२५ मा इन्धन गाडी र विद्युतीय गाडीको मूल्य बराबर हुने प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग विश्वभर स्वस्फुर्त रूपमा बढ्दै जाने अवस्था छ । याे परिप्रेक्षमा मुलुकले ठूलो आर्थिक भार बेहोरेर पाँच वर्षपछि हुने स्वाभाविक परिवर्तनलाई हतारो गर्नुपर्ने विशिष्ट कारण रतिभर देखिँदैन ।
सन् २०२५ मा इन्धन गाडी र विद्युतीय गाडीको मूल्य बराबर हुने प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग विश्वभर स्वस्फुर्त रूपमा बढ्दै जाने अवस्था छ । याे परिप्रेक्षमा मुलुकले ठूलो आर्थिक भार बेहोरेर पाँच वर्षपछि हुने स्वाभाविक परिवर्तनलाई हतारो गर्नुपर्ने विशिष्ट कारण रतिभर देखिँदैन ।
विगत तीन दशकमा करिब २.५ लाख कार/जिप/भ्यान आयात भएको देखिन्छ | मानौं, यी सबै विद्युतीय गाडी हुन्थ्यो भने वर्षेनी केवल १२.५ अर्ब रुपैयाँको इन्धन तथा मर्मत आयातमा बचत हुने थियो । साथै, वर्षेनी ४.७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको केवल ९० मेगावाट अतिरिक्त बिजुली खपत हुने थियो । जुन मुलुकको कूल बिजुली उत्पादन क्षमताको सानो हिस्सा मात्र हो ।
तर, २.५ लाख विद्युतीय गाडी आयात गर्दा मुलुकले ५२७ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्चिनुपर्ने र सरकारले ५५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व गुमाउनुपर्ने थियो । यसकारण, तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा विशेष सहुलियत दिएर निजी प्रयोजनका लागि विद्युतीय गाडी अविलम्ब आयात गर्नुपर्ने बिशिष्ट अवस्था देखिँदैन ।
मुलुकलाई आर्थिक हानी हुने गरेर गत वर्षसम्म प्रदान गरिएको अत्याधिक भन्सार सहुलियत यस पाला बजेटले सम्बोधन गरेको छ । उच्च सहुलियतका बाबजुत विदेशमा पनि विद्युतीय गाडी अन्य गाडी भन्दा निक्कै महँगा छन् । तसर्थ, नेपालमा यी दुई गाडीको मूल्य कृतिमरूपले समान बनाउनु पर्ने चटारो थिएन ।
यसै पनि हाम्रो सन्दर्भमा विद्युतीय गाडी सम्पन्न वर्ग र अतिरिक्त सवारी साधनको रूपमा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ । नीतिगत अनिश्चितताको प्रसंगमा भने सरकार बिगतको गलत निर्णयको कारण चाँही पक्कै चुकेको हो । सामान्यतया सरकारी नीतिकै आधारमा लगानीकर्ताले लगानीका योजना तयार गरेका हुन्छन ।
गौचन ,सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसी (इआइडिएस) का निर्देशक हुन् ।